Munaasabada daahfurka 2-aad ee idaacada Daljir Buuhoodle, gobolka Cayn (Taswiir). – Radio Daljir
Nofeembar 7, 2009 12:00 b 0
Buuhoodle, Nov 07 – Munaasabda balaadhan oo lagu daahfuray idaacada Daljir Buuhoodle ayaa lagu qabtay magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn.
Munaasabada oo ahayd mid si bilan loo agaasimay, ayna ka soo qayb galeen madaxda maamulka gobolka, degmada, Issimo, indheergarad iyo dadweyne kale ayaa ugu horayn waxaa ayaadka quraanka kariim ka ah ku furay Sh. Mukhtaar Axmed Xaaji Faarax oo ah daaciga magaalada Buuhoodle.
Sh. Mukhtaar ayaa dhamaan ummadda Muslimiinta ah iyo hawlwadeenada idaacada Dalir Buuhoodle kula dardaarmay cabsida Eebe, iyo in si Alle ka cabsi ku dheehan tahay ay ugu adeegaan bulshadooda.
Intaasi kadib waxaa hadalka lagu soo dhaweeyey Agaasimaha idaacada Daljir Garoowe Fu’aad Xasan Caaqil “Sanyuura” oo magaalada Buuhoodle u soo gaadhey in uu dib u furo xarunta cusub ee idaacada Daljir Buuhoodle.
Sanyuura ayaa warbixin dheer ka bixiyey himilada idaacada Daljir, tadawurka ay soo martay, iyo xaruntan cusub ee Buuuhoodle.
?Waxaa farxad weyn ii ah in maanta aan imaado magaalda Buuhoodle oo aan mudo dheer warbaahinta ka sheegayey, waxaa maanta farxad ii ah in aan imaado Buuhoodle, aniga oo masuuliyad u wada, anigoo aan weligey arag” ayuu yiri Sanyuura.
Waxaa hadalka lagu soo dhaweeyey Guddoomiye ku xigeenka gobolka Cayn, ahna ku simaha Guddoomiyaha gobolka Maxamuud Sh. Cumar Xasan oo tilmaamay in uu aad ugu faraxsan yahay in mar kale Idaacada Daljir laga furo Buuhoodle.
Intaasi kadib waxaa hadalka loo weeciyey dhinaca cuqaashii shirka ka soo qayb gashay, waxaana mikrafoonka lagu soo dhoweeyey Caaqil Cabdisamed Cali Xasan oo ka mid ah cuqaasha aadka looga yaqaano gobolka Cayn iyo nawaaxigiisa.
Waxaa isna madasha ka hadlay xisaabiyaha wasaarada maaliyada goboolka Cayn ee dawlada Puntland C/qaadir Maxamed Hiirad.
Md. Hiirad ayaa aad usoo dhaweeyey furitaanka idaacada Daljir Buuhoodle isaga oo bulshada Buuhoodle ugu baaqay in ay la shaqeeyaan hawlwadeenada idaacada.
Gabagabadii, waxaa hadalka soo afmeeray Garad Saleebaan Buraale oo hadlaka ku soo khatimay duco uu eebe uga baryey idaacada Daljir Buuhoodle in ay noqoto midii sida ugu haboon ugu adeegta bulshadeeda.
Dadweynaha ku nool magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa aad u soo dhaweeyey baahinta mar 2-aad ee Daljir Buuhoodle, iyada oo bulshadu ay aad dhegta ugu hayso barnaamijyada xiligan ka baxa idaacada Daljir Buuhoodle.
Ma aha markii ugu horeysey ee idaadacada Daljir xarun ku yeelato magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn.
Idaacada Daljir oo laga dhegayso gobollada Puntland, fadhiyana ku leh magaalooyinka waaweyn ee Puntland sida Galkacyo oo ah fadhigeeda 1-aad, Bossaso, Garowe ayaa baahinteedu gaadhaa tuulooyinka iyo miyiga Puntland.
Waxaa hore looga dhegaysan jirtay magaalda Laascaanood ee gobolka Sool, balse aanay muddo 2 sanno ku dhaw ka hawlgalin arrimo amniga la xiriira awgood.
Buuhoodle, Galdogob, Qardho iyo Buurtinle ayaa ka mid ah magaalooyinka kale ee ay idaacadu fadhiyo ku leedahay.
Waxaa baahinta idaacada Daljir ay gaartaa dhanka Bari buurlayeda fog ee gobolka Bari, Badhan, iyo xeebaha dalka Yemen, dhanka Galbeedna dhulka Somalida ee Ethiopia, halka dhanka Koonfureedna Beledewyn.
Waxaa Dlajir la aasaasay sannadkii 2003-da, waxaana ay baahisaa barnaamijyo isugu dhafan daraasaad cilmiyeed, hogatusaalayn bulsheed, iyo u xog warran dhegayste.
?Wasiiru-dawlaha Maamul-wanaaga Puntland oo aan ka waraysanay safar hawleedka M/weyne Faroole ee Kenya.